Uyakha njani iNkcubeko eqhutywa yiDatha ukuze wandise iNkampani yeNkcazo | Martech Zone
Uyakha njani iNkcubeko eqhutywa yiDatha ukuze wandise iNkampani yeNkcazo yakho
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, 2021 UJeff Beck
Kunyaka ophelileyo kube nefuthe kuwo onke amashishini, kwaye kusenokwenzeka ukuba usecicini lokukhuphisana. Kunye neeCMOs kunye namasebe ezentengiso Ukufumana kwakhona kunyaka wenkcitho ebuyisiweyo, apho utyala imali kwiidola zakho zentengiso kulo nyaka unokukubeka kwindawo yentengiso yakho.
Ngoku lixesha lokutyala imali kwisisombululo setekhnoloji esiqhutywa yidatha ukuvula ulwazi olungcono lokuthengisa. Ayilogumbi lokuhlala elinamaqhekeza elinemibala yeefenitshala ezahlukileyo ezinemibala ekhethiweyo engqubanayo (ngaphandle kweshelfu), kodwa iseti eyenzelwe ngokwesiqhelo ehambelana nendawo yakho eyodwa (yakha isisombululo sakho seMartech).
Ukuba ujoliso lwakho kukukhokelela kwisizukulwana kunye nokukhula, ukudala inkcubeko egxile kwidatha kunye nokwakha itekhnoloji efanelekileyo yokusebenzisa loo datha sisitshixo ekuvuleni iziphumo zentengiso ezingcono. Nantsi indlela:
1. Iimpumelelo ezincinci zinokuba nefuthe elikhulu
Nokuba iinkqubo zakho ziqhutywa ngamaphepha afana nezethu zibuyile ngo-2014, okanye ungumnini kwaye usebenza ngokuhambelana ngokupheleleyo nezisombululo ezinje ngeHubSpot, iMarketo, okanye i-ActiveCampaign, ukufumana iindlela ezintsha zokudibanisa nokusebenzisa idatha yakho kunokumiswa ukuba Iqela lakho alisetyenziselwa ukuguquguquka kunye notshintsho.
Ukuphumelela okuncinci kunokuba nefuthe elikhulu.
Ukuqala ngeendlela ezincinci-njengokongeza iinkalo ezimbalwa zedatha yenkonzo yabathengi kwiirekhodi zakho zonxibelelwano-zinokuvula imikhankaso ephumelele ngakumbi.
Xa iqela lakho lifumana utyalomali lwedatha ngohlobo lweziphumo, uya kuguqula imeko “mandisebenze nento elungileyo” ukuba "Zeziphi izinto ezintsha esinokuziqonda? ”
2. Tyala imali kwizixhobo ezifanelekileyo
Ukuba uza kutshintsha ngokugqibeleleyo ukuba intengiso yakho inokuba yimpumelelo kangakanani na, kungekudala okanye kamva uya kuba nemida kwizisombululo ezishelfini.
Abayi kukala ngesantya osifunayo, kwaye iinjongo zabo ezicwangcisekileyo aziyi kuhlala zihambelana nezakho.
La maqonga esoftware omeleleyo azama ukukhonza amakhulu emizi-mveliso, kwaye iiparameter ezizodwa zenkampani yakho ziya kufuna ulungelelwaniso lwesiko ukuvula inqanaba lokujolisa eligqithisa amandla okhuphisana nawo.
Ukufumana iziphumo ezingcono, kuya kufuneka ushukume imeko ekuyo ngokutyala imali kubasebenzi beetekhnoloji engaphakathi endlwini kwaye ushenxisa kwiindawo ezikhuselekileyo nezitofotofo.
Ngokuthe ngcembe ukufudukela kwizisombululo zesiko kwaye ugxile kwezona mfuno zibalulekileyo zombutho wakho kuya kunceda ukubonisa inkqubela phambili kunye nokuthethelela ukuhambisa inkcitho engakumbi kulwakhiwo lwexesha elizayo.
3. Qhagamshela ithemba lakho kunye neDatha yaBathengi kwiiNdawo zokuchukumisa
Ekugqibeleni, izitena ngezitena, uya kuba nakho ukwakha isisombululo esikhethekileyo seMartech esinokudibanisa iindawo ezahlukeneyo zeshishini lakho ukuze ufumane ulwazi olungcono lwabathengi.
Khawufane ucinge ngenqanaba lokujolisa elikhoyo xa usondla idatha kwiifowuni zenkonzo yabathengi kunye nolawulo lwempahla yexesha lokwenyani kwiphulo lakho lokuthengisa elizayo.
Ukwazi ukuba zeziphi iintlungu ezichaza icandelo ngalinye labaphulaphuli elihlangabezana nalo-kwaye wandise ukungxamiseka ngokubonisa ukuba ingakanani imfuyo oyishiyileyo ngexesha lokwenyani- inokukunceda ufumane imiyalezo elungileyo kubantu abalungileyo ngamaxesha afanelekileyo.
Thatha elinye inyathelo uye phambili kwaye ucinge ukuba ukufundwa kwelo phulo lokuthengisa kunokunyusa njani inkonzo yabathengi kunye nolawulo lwempahla.
Ngoku uyila iqonga elinokukunceda ulungelelanise yonke imiba yombutho wakho.
4. Ungabhalisi utshintsho kunye neSayizi enkulu kunazo zonke
Uvavanyo lwesiko lobulumko bokuthengisa ngesampulu encinci kwaye ukhuphe olo tshintsho kumaqela amakhulu nakhudlwana. Le ndlela isebenza kakuhle xa ujongene nemisebenzi yentengiso encinci.
Xa usebenza kwiindawo zelizwe liphela kwaye uqhuba imikhankaso eyahlukeneyo kwimimandla eyahlukeneyo, igalelo ledatha entsha linokusebenza ngokwahlukileyo kuvavanyo olunomda ngokuchasene nezinga.
Ngokukhupha utshintsho lwakho ngenkalipho kubaphulaphuli abakhulu, unokufunda ngokukhawuleza kwaye ungachithi xesha kwimijikelezo engapheliyo yeziphumo ezilahlekisayo. Uvavanyo olukhulu lithetha iindlela ezimfutshane kwisisombululo esisebenzayo esinokunceda kwiimfuno ezininzi zeshishini lakho.
5. Funda kwaye uhlengahlengise ngokukhawuleza
Ukuvavanywa kwinqanaba kuthetha ukuba ufuna inkqubo ecacileyo neyomeleleyo yokuphindaphindwa, kunye nendlela elungileyo yokuhluza ingxelo ekuqhubela phambili ngokuchasene nemingxunya yemivundla yotshintsho olunye olungacacisi indleko okanye iinzame.
Ukusetha le nkqubo kwangoko-xa uqhuba amaphulo ambalwa ngonyaka-kunokukunceda ukunqande ukukrwela ukufumana isisombululo endaweni xa uthengisa ngomlinganiselo.
Ukuchonga ii-KPIs ezicacileyo, ezibanzi zombutho kunye neenjongo zexesha elide kunokunceda uthathe isigqibo sokuba uza kuthabatha inyathelo kwimpendulo ethile. Kwaye kunokukunika into yokubonisa xa ucacisa izigqibo zakho kwiqela lakho.
Xa ujolise kuphela kwiphulo elilandelayo, ucwangciso lweminyaka emithathu okanye emihlanu ezayo ngamanye amaxesha unokuziva ukude kakhulu ukwenza izizathu zokutshintsha kwezinto.
Ukuba ungachonga ungeniso lwedatha olunokunceda ukwenza ukuba iphulo elilandelayo liphumelele ngakumbi, ungaqala ukubeka phambili ukuba yeyiphi itekhnoloji ekufuneka uyenzile- kwaye zeziphi izinto ezingena endaweni yeshelufu eziyimfuneko ukwenza ukuba kwenzeke.
Ukusebenza ngokuthe ngcembe, unokuwugqithisa umxube wombutho wakho weMartech ngesisombululo sesiko esinokulawula ixesha elitsha lokuthengisa eliqhutywa yidatha kunye nokuvula iziphumo eziphezulu.
Qala encinci kwaye uvavanye enkulu, kwaye uya kubona utshintsho kwinkcubeko kunye ne-ROI ecacileyo.
tags: Icandelo labaphulaphuliidatha yomthengiinkcubeko eqhutywa yidathaeqhutywe kwedathamartechUmxube wemartechisitaki seMartechidatha yedathaubungakanani besampuluukuvavanya kwinqanaba
Jeff Beck Friday, April 9, 2021 Friday, April 9, 2021
UJeff liGosa eliyiNtloko lesiGqeba kunye noMongameli Isisombululo seKhaya seLeaf, Umnikezeli ophambili weemveliso zasekhaya- ezinje ngeewindows, iigatha, ukhuseleko lwasekhaya, nokunye okuninzi. Ngaphezulu kweminyaka eli-16 yamava oshishino agxile kubuchwephesha bolwazi, ukusebenza, ulawulo lweeprojekthi, kunye nobunkokeli, u-Beck utshintshe ukusebenza kweshishini langaphakathi, ephumeza ubuchwepheshe obutsha obukhuthaze isikali esingenakuthelekiswa nanto.
mParticle: Qokelela kwaye uqhagamshele iiDatha zabaThengi kwii-API eziKhuselekileyo kunye nee-SDKs
Umnxeba: Lawula uMbhobho wakho weNtengiso kwiGmail ngale CRM igcweleyo
Ingaba ucinga ntoni? Rhoxisa impendulo